मोवाइलको ब्याट्री टिकेन ? अव यसो गर्नुहोस् – Akhabar Dainik
मोवाइलको ब्याट्री टिकेन ? अव यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं, असोज २४ । मोबाइलमा धेरै समय ब्याट्री नटिकेर हैरानु हुनु भएको छ ? अझ लोडसेडिङ भइरहने ठाउँमा त व्याट्रीको चार्ज लामो समयसम्म टिक्दैनन् । कतिबेला लाइन आउला र चार्ज गर्न पाइएला भनेर बस्नु पर्ने बाध्यता त छँदैछ ।
तपाईले यदि आफ्नो मोबाइलमा लाइभ वालपेपर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् । लाइभ वालपेपर राम्रो त हुन्छ तर यसले पनि मोबाइलको धेरै ब्याट्री खान्छ ।
सकेसम्म कालो वालपेपर राखे राम्रो, किनकी यसले मोबाइलको कम पिक्सेल प्रयोग गर्ने भएकोले ब्याट्री पनि धेरै खर्च हुँदैन ।
भाइब्रेटरलाई अफ गर्दा र रिङको भोलुम सुन्न सकिने गरी सानो बनाउँदा पनि केही हदसम्म ब्याट्री जोगिन्छ । तर, भाइब्रेसन हटाउँदा तपाइले बोकिरहेको मोबाइलमा फोन आएको थाहा नहुने सम्भावना भने रहन्छ । मोबाइलमा ब्याट्री कम छ र छिटै चार्ज गर्ने सम्भाबना छैन भने म्युजिक प्लेयर, क्यामरा, इन्टरनेट जस्ता अनावश्यक फिचर नचलाउने ।
मोबाइलमा गीत सुन्दा वा फिल्म हेर्दा हेडसेट अर्थात एयरफोनको प्रयोग गर्ने । यसले गर्दा तपाइको मोबाइल स्पीकरमा भर पर्दैन र व्याट्री जोगिन्छ ।
फेसबुकको नोटिफिकेशन तथा अरु नोटिफिकेशन बन्द गर्दा पनि केही मात्रामा व्याट्री बचत हुन्छ । व्याकग्राउण्डमा चलिरहेका अनावश्यक एप्सलाई हटाउदा वा बन्द गर्दा पनि ब्याट्री लामो समय सम्म टिक्छ ।
यदी फोन उठाउनु नपर्ने अवस्था जस्तो सुत्दा, मिटिङमा, गाडीमा रहँदा, फिल्म फोन अफ गर्न वा भाइब्रेटर अफ गरेर राख्नुहोस । सकेसम्म मोबाइलमा छोटो कुराकानी गर्नुहोस् ।
यो तरिका तपाईको मोबाइलको व्याट्रिको आयु स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन तपाईको स्वास्थ्यलाई पनि लाभदायक हुन्छ ।